चुलियो बुर्तिवाङमा मर्चाको चर्चा, प्रहरीव्दारा नौ क्विन्टल मर्चा बरामद : कुन ठाउँमा छ फ्याक्ट्री ? – ebaglung.com
चुलियो बुर्तिवाङमा मर्चाको चर्चा, प्रहरीव्दारा नौ क्विन्टल मर्चा बरामद : कुन ठाउँमा छ फ्याक्ट्री ?
२०७४ माघ ६, शनिबार ०९:१४	Footer Slider, Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
4.14285714286 out of5based on7user ratings
सुमन सुनार, बुर्तिवाङ २०७४ माघ ६ । ढोरपाटन नगरपालिकाको ढोरपाटनमा रहेको प्रहरी चौकी जाडोका कारण यतिबेला स्थानीयवासी सँगै बोवाङ (बेसी)मा झरेको छ । हाल बोवाङमा रहेको प्रहरी चौकीले झण्डै दुई महिनाको अन्तरालमा चौकी ईन्चार्ज प्रसनि कृष्णबहादुर चुँडालीको सक्रियतामा ९ क्विन्टल भन्दा बढी परिमाणमा लोकल रक्सी (घरेलु मदिरा) बनाउन नभै नहुने बस्तु मर्चा बरामद गरी राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधीको रोहबरमा भुजीखोलामा बगाएर नष्ट गरेको छ ।
बोवाङ स्थित प्रहरी चौकीले गत मंसीर १८ गते साँझ ६.१५ बजे बुर्तिवाङ देखी सुकुर्दुङ तर्फ आउदै गरेको ग १ ख ६०३२ नं को बस बोवाङमा चेकजाँच गर्दा सो बसमा ५ वटा बोरामा २ क्विन्टल ३० ग्राम मर्चा प्रहरीले बरामद गरेका थियो भने गत बुधबार राती करिव १ बजेको समयमा प्रहरी टोलीले चेकजाँचको क्रममा ढोरपाटन नगरपालिका–७ सेल्लीखोला भन्ने स्थानमा बुर्तिबाङ देखि ढोरपाटन तर्फ जादै गरेको लु १ च ३९६५ नम्बरको पिकअप जीपबाट ७ क्विन्टल मर्चा बरामद गरेको हो ।
अहिले स्थानीय युवाहरु र प्रहरी चौकीको सक्रियतामा बोवाङ क्षेत्रमा अबैध घरेलु मदिरा नियन्त्रण अभियान सन्चालन गरिएको चौकीका इन्चार्ज असई चुँडालीले जानकारी दिएका छन् ।
सामाजिक विकृतिको मुख्य कारक मदिरा सेवन भएको भन्दै त्यसको सुधारका निम्ती स्थानीय युवाहरुले समेत सक्रियता बढाएका छन् । स्थानीय युवाहरुले अवैध मदिरा उत्पादन, विक्री वितरण नियन्त्रण गर्न बोवाङमा देव बहादुर सुनारको अध्यक्षतामा एक टोल सुधार समिति नै गठन गरेका छन् । समितिले समाजमा कसैले मदिरा सेवन गरेको तथा मदिरा सेवन गरि हो हल्ला गरेको पाईएमा नगद जरिवाना सहित कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी दिने गरेको समितिका अध्यक्ष सुनारको भनाई छ ।
बोबाङ क्षेत्रमा मदिरा सेवनकै कारण समाजमा विभिन्न अपराधिक क्रियाकलाप, घरेलु हिंसा, झै–झगडा, सम्वन्ध विच्छेद जस्ता समाजिक विकृती बढिरहेको भन्दै त्यसको सुधार तथा समाजमा शान्ति सु–ब्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यले अबैध घरेलु मदिरा नियन्त्रण अभियान थालिएको ढोरपाटन प्रहरी चौकी ईन्चार्ज चुडालीले बताए । प्रहरी चौकीमा अधिकांश रुपमा मदिरा सेवनकै कारण हुने गरेका विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाहरु आउने गरेको प्रसनि चुँडालीको ठहर छ ।
लोकल मदिरा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने मर्चा बुर्तिवाङबाट बोवाङका विभिन्न स्थानमा विक्रीका लागि ल्याईने गरेको स्थानीयले बताएका छन् । बुर्तिवाङ बजार देखी केहि माथी मर्चा बनाउने गरेको श्रोतको दाबी छ ।
सानो साईजको एक दाना (गोटा) मर्चा १ रुपयाँ र अली ठुलो भए २ रुपयाँ गोटा बिक्री हुने स्थानीयले बताए । एक बान रक्सीका लागी ५/६ दाना मर्चा लाग्ने र करीब २० देखी २२ बोत्तल रक्सी बन्ने उनिहरुको भनाई छ । अहिले एक बोत्तल लोकल रक्सी ५० रुपयाँमा बिक्री हुने गरेको छ । प्रहरीले कडाई गर्न थालेपछी यहाँका व्यापारीहरुले लुकाई छिपाई बेच्ने गरेको स्थानीयको भनाई छ ।
यति ठुलो परिमाणमा मर्चा बरामद हुँदा पनि प्रहरी यसका उत्पादक सम्म पुग्न नसक्नु वा खोज खबर लिनमा ढिलाई गर्नुले स्थानीयवीच विभिन्न चर्चा हुने हुन थालेको छ । मर्चा बोकेर गाउँगाउँ ठाउँठाउँ पुग्ने सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान गर्नु पर्ने स्थानीयको भनाई छ । जब लोकल रुपमा उत्पादित घरेलु मदिराले समाजमा विभिन्न खाले हिँशा बढाउन सहयोग गर्छ भन्ने सरोकारवालाहरुको बुझाई छ भने घरेलु मदिरा उत्पादनमा नभै नहुने मर्चाको फ्याक्ट्री र यसका सन्चालकलाई किन कानूनी दायरामा नल्याउने ? भन्ने स्थानीयले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । मर्चा ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर मर्चाका उत्पादकहरु सम्म पुग्न प्रहरी किन चुक्यो ? ढुवानी कर्ता सवारी र यसक चालकहरु कार्बाहीको दायरामा किन आउन सकेनन् ? यसको जवाफ खोजीरहेका छन ढोरपाटन नगरवासी ।
लागु औषधको रुपमा लिईने मर्चा माछा लगायत विभिन्न प्रजातिका जलचर हुने नदीनालामा नष्ट गरिनु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ त्यसतर्फपनि सरोकारवालाहरुको ध्यान जानु जरुरी रहेको स्थानीयवासीले औल्याएका छन् ।
तस्वीर- गत मंसिर १८ गते बरामद गरिएको मर्चा भुजीखोलामा नष्ट गर्दै ।
विचार : अनुशासन र अराजकताको अन्तरविरोध !
एमाले खर्वाङव्दारा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम
छबिलाल पाण्डे, बुर्तिवाङ २०७६ मंसिर ५ । उपनिर्वाचनको मिति आउन अब ९ दिन मात्र बाँकी छ । बागलुङ २ (ख)को…